Electra izao no misy, ny jailbreak CoolStar miaraka amin'i Cydia ho an'ny iOS 11 | Vaovao IPhone
La adihevitra momba ny jailbreak CoolStar sy ny fivoahany andro vitsy lasa izay toa niha-nihena ary androany dia manana vaovao tsara ho an'ireo izay tia mampanjifa ny fitaovany na mametraka tweaks. Hatramin'izao, ny fomba dia azo tanterahina amin'ny fomba samihafa fa tsy misy avela hametraka Cydia amin'ny terminal. Niova ity tamin'ny alàlan'ny tsimbadika vaovao an'ny fitaovana CoolStar: Electro 1.0.
Ity kinova ity kinova miorina io ny CoolStar jailbreak ary mamela Cydia hapetraka ary jailbroken amin'ny fitaovana rehetra mifanaraka amin'ny iOS 11-11.1.2. Mazava ho azy, mampitandrina antsika ny mpamorona fa mety hiteraka tsy fahombiazana ilay fitaovana ary tokony havaozina hatrany ilay fitaovana mba hialana amin'ny tsy fahombiazana mety hitranga.
Cydia dia efa eo amintsika miaraka amin'ny fanavaozana ny jailbreak Electra
Farany, azo alaina izao ofisialy ilay jailbreak CoolStar nohavaozina antsoina hoe Electra. Amin'ity kinova vaovao ity dia afaka mametraka Cydia amin'ny fitaovantsika sy mametraka tweaks tianao indrindra. Ho fanampin'izany, a antontan-taratasy nozaraina Azonao atao ny manamarina hoe iza no tweaks mifanaraka amin'ny iOS 11 izay havaozina rehefa manavao ny fitaovany ny developer. Azonao atao ny mijery ireo tweak mifanentana sy ireo repo ary ireo olana mety haterak'izy ireo amin'ity kinova Electra vaovao ity.
Ho fanampin'ny fanampiana an'i Cydia, ity kinova vaovao ity dia mitondra vaovao teknika vitsivitsy ihany fa tsy maintsy maneho hevitra isika:
Cyida dia tafiditra nohavaozina amin'ny kinova iOS 11
Ny repository Electra default dia nampiana
Ny fitaovana dia tafiditra ao amin'ny tahiry mitovy Subsitute, Tweak Loader ary Substrate Compatibility Layer
Zava-dehibe ny manasongadina fa tsy ny tweaks sy ny fampiharana rehetra no mifanaraka amin'ny iOS 11 ary mety hiteraka reboot na lesoka isan-karazany
RocketBoottrap 1.0.6 dia ilaina amin'ny fampiasana amin'ny iOS 11
Ny fanavaozana ny Electra dia averina indray raha misy izany amin'ny ho avy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Electra, ny jailbreak CoolStar miaraka amin'i Cydia ho an'ny iOS 11, efa misy izao
Mety amin'ny IOS 11.2 ve izany?
HayQueRead dia hoy izy:
Resaky ny famakiana izany, sa tsy izany?
"Ity kinova ity dia kinova miorina amin'ny jailbreak CoolStar ary mamela anao hametraka Cydia sy jailbreak ny fitaovana rehetra mifanaraka amin'ny iOS 11-11.1.2"
Mamaly an'i HayQueLeer
Yosiheleido dia hoy izy:
Milaza koa izy io fa kinova miovaova io, ary ao amin'ilay fehezanteny mitovy dia milaza izy fa 'mety manolotra bibikely'
Ka heveriko fa amin'ity tranga ity, tsy dia mandray anjara firy ny famakiana.
Valiny tamin'i Yosíheleido
tsy mazava dia hoy izy:
Io dia kinova miorina ary mety mampiseho bibikely tsy misy ifandraisany amin'izany. iOS 11.2.6 dia kinova miorina amin'ny OS, mbola misy bibikely ... Ny kinova Cydia na ny tweaks dia mbola misy bibikely ...
Mamaly ny tsy fitoviana
Haha tsy manana fanontaniana akory izy, anontaniany iray izy dia nafana izy
Manararaotra aho, aza manonona raha teteret tsy voalamina, semitetered ...? Ankoatr'izay, misy teak mendrika hatao?
Chester dia hoy izy:
Ampidiro Cydia ireo fonosana dia mivoaka tsy misy dikany amin'ny teôria dia toy ny hoe tsy mandeha izy io ary tsy misy fomba hametrahana tweak, raha misy mahalala?
Valiny tamin'i Chhester
Manasaina izy io, novonoinao ary novonoiny, fa kosa mandeha mankany amin'ny application Electra ianao, manome azy "jailbreak" ary mamelona indray ireo bitsika efa nataonao izay.
Manana iphone 6 plus miaraka amin'ny ios 10.3.3 napetraka aho.
Azoko atao ve ny mametraka ios 11.1.2 hahafahako mamaky jailbreak, na dia tsy efa nanao sonia azy aza i Apple?